Njengoba "Tele2" ukuhlola lonke iphakethe?
izinhlelo tariff "Tele2" yenkampani sikhulunywa ngezindlela ezihlukene ohlelweni zokubhalisa lokukhokha noma ukukhokhelwa amasevisi wezokuxhumana "Eqinisweni" ukusetshenziswa kwazo. Ngesikhathi esifanayo, futhi kuqala futhi esimweni sesibili, kungase kudingeke ukuba uthole izinsalela "Tele2" iphakethe. Phela, okuningi amakhasimende, ngaphezu izidingongqangi zokuxhumana, usebenzisa okukhethwa kukho okuseqophelweni ukuthi nokwandisa value abo, noma ukunikeza traffic ethize ukufinyelela ku-intanethi. Ukuze uqinisekise ibhalansi amaminithi, imiyalezo futhi wamamegabhayithi, kumele njalo. Ngeke ahlale ngaphandle koxhumano ngesikhathi esifanele futhi ugweme izindleko ezingenasidingo. Lesi sihloko sichaza indlela ukukhipha "Tele2" ukuhlola lonke iphakethe, okuyinto yavulwa ngaphezu noma kufakwe uhlelo tariff.
Izinketho amaphakheji nezindlela ukuhlola ibhalansi kwabo
Ukusebenzisa umyalo owodwa, awukwazi ukuhlola izinsalela emasakeni, okuyiwona ayingxenye ebaluleke kakhulu plan tariff (okuyinto, njengoba umthetho, nalezo TP abanale zokubhalisile) futhi zinikezwa njengengxenye le ndlela inikwe amandla. Ngakho, kungashiwo ihlukaniswe ezahlukeneyo amabili ngesikhathi amaphakethe idatha izinsalela yokuqinisekisa. Inketho yokuqala kufanelekile bonke yamanani ne ivolumu kuhlanganisiwe amasevisi zokuxhumana ( "Black", "The Black" kanjalonjalo.). Okwesibili kuphela ewusizo uma kukhona izinketho ezengeziwe egumbini kukhona. Uma ungeke ukwazi ukuphendula kulokho ukusetshenziswa TP, nokuthi kukhona noma iyiphi yasebenza Igumbi amaphakheji, uzoba wusizo for imibuzo elandelayo:
ukuthayipha ne kwefoni Ukudayela * 107 #, ungakwazi ukuthola ulwazi ecebeni tariff (kuhlanganise ucacise intengo ngomzuzu, thumela umlayezo, nokunye.);
ukuthayipha idivayisi isicelo * 153 #, ungafunda onjani amasevisi, okuhlanganisa izinketho nokhunye anikwe amandla egumbini lakho.
bamasizo inkampani "Tele2" unika ithuba ukuze kunqunywe ukuthi yiziphi indlela ulwazi ukuthola kuyoba ezithakazelisayo kakhulu futhi eyamukelekayo.
Umsizi Inthanethi (eyaziwa ngokuthi isitatimende akhawunti iklayenti siqu);
isicelo for zobuchwepheshe mobile (kuyinto Analogue of ehhovisi Inthanethi);
Shayela u-opharetha onguchwepheshe mobile isikhungo contact.
Uma ungafuni nesididayo imibuzo mayelana onjani amasevisi uxhumekile futhi umane nentshisekelo lonke wamamegabhayithi kufakwe iphakethe ( "Black"), "Tele2" inikeza amasevisi zayo contact centre. Uchwepheshe uzohlola ulwazi inombolo bese emva kwamaminithi ambalwa ukuphendula imibuzo.
"Tele2" ukuhlola ibhalansi iphakethe tariff izinhlelo esinevolumu kuhlanganisiwe amasevisi
Subscribers usebenzisa tariff izinhlelo ulayini "Black", nje ukukhumbula umuntu inhlanganisela elula. Ngemva yethula idivayisi yeselula uzothola umlayezo wombhalo, elizoquketha ulwazi yini lemali SMS, wamamegabhayithi, futhi amakholi asele ngesikhathi samanje. USSD sicelo kanje * 155 * 0 #. Ukuze "Tele2" Igumbi hlola lonke iphakethe ngakho-ke kulula kakhulu futhi ngokushesha. Asikho isidingo ukubiza opharetha kanye nokufinyelela ku-intanethi. Ngokufanayo, kungase kwenziwe endabeni "Tele2" isheke ukulinganisela "abamnyama kakhulu" iphakethe, "The Black".
Ukuthola ulwazi ibhalansi izinketho ezengeziwe ku-intanethi
Kulabo abane ukufinyelela i-Inthanethi, sebenzisa izinketho ezengeziwe ukuze izinketho opharetha "Tele2", futhi inikeza izicelo USSD ekhethekile ukunikeza ulwazi esifike ngesikhathi. Ngesikhathi esifanayo, ngaphambi kokuba uthole izinsalela "Tele2" iphakethe, kufanele uthole ukuthi iyiphi kuwo iyasebenza ngalolu daba. Bese ushayele inhlanganisela efanele izimpawu on a idivayisi yeselula.
Sicela uqaphele ukuthi yonke imibuzo yakhiwa izingxenye ezimbili: eyokuqala - kuyinto * 155 *, kanti eyesibili kufaka esiyingqayizivele ikhodi iphakethe futhi uphawu "igridi". Nasi uhlu zokukhomba ezingafani nalutho olunye for indlela ngayinye.
"Usuku inethiwekhi" - 16 "ipotimende Inthanethi" - 021, "Inthanethi isikhwama esincane" - 020, "phone Inthanethi" - 15 "Inthanethi Pack" - 19.
Ngakho, uma uye isebenze ukhetho "ipotimende Inthanethi", bese uthayipha umbuzo * 155 * 021 #, uzothola umlayezo wombhalo ngolwazi oludingekayo.
Ezinye izindlela ukuhlola esele amaphakheji
Njengoba "Tele2" ukuhlola lonke iphakethe ngezinye izindlela? Ngokusebenzisa i-akhawunti ku-inthanethi futhi sibe nekhono ukubona ukuthi wamamegabhayithi eziningi, imizuzu kanye nemiyalezo osale amaphakheji afakwe plan tariff, noma wenze okwengeziwe. Kukhona nokuhlinzekwa idatha Kwenziwa inthanethi ngesikhathi isicelo. Through isicelo efakwe kudivayisi ephathekayo, ungase futhi uthole lolu lwazi.
Futhi ukukwazisa mayelana nodaba okukhulunywa ngakho, ukuphendula imibuzo mayelana ekamelweni lakho, abasebenzi bazokwazi ukuxhumana maphakathi kanye salon zokuxhumana opharetha amaselula (idatha kuphela inikeza umnikazi ngezinombolo). 611 kufanele ushaye kusukela inombolo "Tele2" bese ulinde udondolo impendulo noma ukusebenzisa isevisi okuzenzakalelayo ukuze uthole idatha.
Iphasela leposi noma iphakeji: umehluko kanye nezinhlobo izinto
Kunganjani akhokhe extra-Wi-Fi indiza?
Isevisi "toot Siqu": isilawuli inketho
Indlela ugcwalise imvilophu ( "Russian Post")? isampula imvilophi
Kanjani ukufunda ukuthi "Beeline", zingaki imizuzu awusenalo, noma njengoba isheke phezu imizuzu "Beeline"
"Bit Super" (MTS): incazelo kanye uxhumano
Yini Indwangu kufanele kube izingane
I-Riza i-Riza ye-Virgin Mary
VMDK - uvula ifayela
Muffin nge-apula. namabhanisi Delicious: zokupheka
Penda izindonga egumbini lokugezela: ezinhle imibono, design kanye nezincomo
Khetha kneepads sokudansa: isitayela, induduzo kanye nokuphepha
KwamaZwe kwezomnotho kanye ukubaluleka kwabo
Abahlanganyeli we "Idol American" lokuqala: uhlu izimpumelelo
Iminduze ehloniphekile. Ukuqala nokunakekelwa eSiberia
Ukuxabana, ukuphikiswa Ukungqubuzana zomphakathi: logic of ukuthuthukiswa
Yini engaba yisimiso segama elithi "uthando": izinketho
9 imikhuba abantu abavukwa endlini ihlale ihlanzekile